CBT Systems Choose Cartoni for Las Vegas Esports Arena | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner and Producer of NAB Show LIVE. Broadcast Engineering News
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » CBT စနစ်များ Las Vegas မှအီလက်ထရောနစ်အားကစား Arena များအတွက် Cartoni Choose
နှစ်ခုကျော်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ San Diego မှ-based CBT စနစ်များတစ်ဦးကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်ပေါင်းစပ်စတူဒီယိုတည်ဆောက်သင်အနေဖြင့်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အကြီးမားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုစတင်ပေးခဲ့ပါတယ် NFL ကွန်ယက်, အ MLB ကွန်ယက်, YouTube ကို ကမ္ဘာတဝှမ်းထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုအဖြစ် Facebook ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို။ ယခုထုတ်လွှင့်ပေါင်းစပ်ခရက်ဒစ်၏သူတို့ရဲ့စာရင်းကိုအခြား high-profile ကိုအမှတ်တံဆိပ်ထည့်သွင်းထားပြီး, Las Vegas မှ '' သစ်ကို HyperX က e-အားကစားနယ်ပယ်တွင်အဆိုပါ Luxor Hotel တွင်တည်ရှိပြီး, တစ်ဦး 30,000 စတုရန်းပေဖျော်ဖြေရေးစက်ရုံ။
"CBT စနစ်များအောက်တိုဘာလ 2018 အတွက်စီမံကိန်းသို့ရောက်လာသည်ကား, ဒါပေမယ့်စီမံကိန်းအမှန်တကယ်မတ်လ 2018 စတင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က start-up, နှောင်းပိုင်းမှခဲ့ကြပါတယ်" ဟုရှင်းပြခဲ့ Darrell Wenhardt, CBT စနစ်များသမ္မတ။ "ကျနော်တို့ကအတိတ်ကာလအတွင်းအဓိကရုဏ်းဂိမ်းများကိုပြုမိခြင်းနှင့် e-အားကစားနယ်ပယ်တွင်ကိုစိန်ခေါ်သည်ကိုသိမှတ်ခဲ့သည်။ ပုံမှန် AV စနစ်ကန်ထရိုက်တာလိုအပ်သောအရာကိုပြီးမြောက်ပိုင်ခွင့် entity မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်လူတွေမျှော်လင့်ထားကြောင်းထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီးအတွက်အရည်အသွေးမြင့်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံးစက်ကိရိယာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြောင့်သင်တစ်ဦးထုတ်လွှင့် System Integration လိုအပ်ပါတယ်။ "
Las Vegas မှ '' သစ်ကို HyperX က e-အားကစားနယ်ပယ်တွင်အမှန်တကယ်ကုန်သွယ်ရောင်းအားဧရိယာကနေအရာအားလုံးနဲ့ဖျော်ဖြေရေးစက်ရုံ, throwback ဂိမ်းများ, ဧည့်သည်ဘားနှင့်အစားအစာဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် 200 လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာကစားနိုင်မည့်ဂိမ်းကစားစနစ်များကိုချီတက်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဧညျ့ဧရိယာဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ် interactive သူတို့ကိုန်းကျင်သူတို့နှင့်အတူ။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့နဲ့ LED ဖန်သားပြင်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ထုတ်လုပ်မှု-ထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းတစ် 1,000- sq. -ပေနှင့်အတူ outfitted ဖြစ်ပါတယ်။ စတူဒီယိုနှင့်လေ့လာသူဧရိယာ။ သို့သော်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထား E-အားကစားနယ်ပယ်တွင်မှယခင်တွေကလည်းလျော့ရဲရဲနိုက်ကလပ်ထံမှဖျော်ဖြေရေးစက်ရုံရဲ့အသွင်ပြောင်းအချို့ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများ featured ။
သင်ရုပ်မြင်သံကြားပရိသတ်ကိုအဖြစ်တိုက်ရိုက်ပရိသတ်အတွက်စီစဉ်ထားရပါမည်ဖြစ်သောကြောင့် "ဤကဲ့သို့သောအာကာသအတွင်း၌များစွာသောစိန်ခေါ်မှုများရှိနေပါသည်။ ဤရွေ့ကားစိန်ခေါ်မှုများအာကာသ၏အဆင်အပြင်, အသံ, အလင်း, နှင့်ထုတ်လွှင့်ကနေအထိ။ ယခင်တွေကလည်းလျော့ရဲရဲနိုက်ကလပ်များတွင်အသံကုသမှုမရှိခြင်းအသံကျယ်သောအသံနှင့်နားမလည်ဖြစ်စေ၏။ အဆိုပါ Arena ညောအမှန်တကယ်ဂိမ်းတစ်ခုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှုများကိုကြောင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲထောက်လှမ်းရေးအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ နောက်တစ်နေ့စိန်ခေါ်မှုအလင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အိမ်သူအိမ်သားအတွေ့အကြုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျထုတ်လုပ်မှုနှင့်စတူဒီယို set ကိုထွန်းညှိခဲ့ကြရသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားခြမ်းတွင်, သငျသညျအလွန်အစိုင်အခဲထောက်ခံမှုလိုအပ်ကြောင်းရှည်လျားသောမှန်ဘီလူးတွေနဲ့ကင်မရာများရှိသည်, သည်, ငါတို့လှည့် Cartoni။ "
စတူဒီယိုလိုက်လျောညီထွေအသက်ရှင်-ထုတ်လုပ်မှုဒေသများစေရန်, CBT စနစ်များနှင့်အတူ outfitted အာရုံစိုက် 20 အကြီးအကဲများနှင့်အတူသုံး Cartoni P22 အောကျခံခုံအပါအဝင် Cartoni ကင်မရာအထောက်အကူတစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်အတူသစ်ကို HyperX အီလက်ထရောနစ်အားကစား Arena outfitted Sony က ကင်မရာများနှင့် ကို Canon မျက်ကပ်မှန်တစ်အာရုံစိုက် 18 tripod သည့်စနစ်အဖြစ်ခြောက်လ Cartoni PTZ tripod ။
"ကျနော်တို့က New York တွင် YouTube ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အောင်မြင်မှုကနေ Cartoni အတူသမိုင်းခဲ့ရပြီး Los Angeles မြို့ကျနော်တို့ကြီး, P-90 အောကျခံခုံနှင့်သေးငယ်, P-20 အောကျခံခုံနှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ဘယ်မှာ။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက် Cartoni ကို ရွေးချယ်. , "Wenhardt ရှင်းပြသည်။ "တစျခုမှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပစ္စည်းကိရိယာများများ၏အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ၏ဖြစ်တယ်, အရေအတွက်အားနှစ်ခုကြောင့်မယုံနိုင်စရာဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာကိုထောကျပံ့ပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်အဓိကထုတ်လုပ်သူများ, က Sachtler, Vinten င်ဖြစ်စေ, တိုင်းပြည်အနှံ့ဘယ်သူမှသင် Cartoni ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ get သောကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။ "
E-အားကစား, သို့မဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း, ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအားကစား pop-up ကြောင့်ယာယီကမ္ဘာတဝှမ်းဆက်ကပ်အပ်နှံထား E-အားကစားရီနာကှငျး၏ကြီးထွားလာသောအရေအတွက်ဂိုဒေါင်ထဲမှာအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ရပ်များထဲကနေလာခဲ့သည်။ ထိုအ Wenhardt သည်နှင့်အညီ, ထိုတိုးတက်မှုနှင့်လူကြိုက်များသည့်အကြောင်းရင်းဟာစုစည်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
"ဒါဟာတကယ်သာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြုရသော NFL သို့မဟုတ်အဓိကလိဂ်ဘေ့စ်ဘော, မကြိုက်သည်မဟုတ်," Wenhardt ကဆိုသည်။ "ဖြစ်သော CBS လတ်တလော Super Bowl တချို့ 100 သန်းကြည့်ရှုရှိသည်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ညတွင် Blizzard နှင့်အဓိကရုဏ်းဂိမ်းနဲ့တူ e-အားကစားကုမ္ပဏီတချို့ကဒီပစ္စည်းပစ္စယစောင့်ကြည့် 45 လူဦးရေသန်းရှိသည်လိမ့်မယ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပါတယ်။ ငါသည်ဤမျိုးဆက်သစ်ဖို့ကမ္ဘာတဝှမ်းကဒီအယူခံဝင်ရှိမယ့်လို့ထင်ပါတယ်။ "
"စင်စစ်, သင်နှစ်ဦးစလုံးတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နိုင်ငံတကာကပိုပြီး E-အားကစားရီနာကှငျးကိုတွေ့မြင်သွားနေကြသည်။ ငါကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းရှုထောငျ့မှသူတို့တစ်နယ်ပယ်တွင်နှင့်ဟိုတယ်များတွင်ထိုင်ခုံတက်ဖြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့မြင်ထင်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ, ဒီမြေတပြင်လုံးအရာအတွက်အလောင်းအစားအစိတ်အပိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ "
Manios ဒစ်ဂျစ်တယ် Cartoni tripod ရဲ့သီးသန့်အမေရိကန်ဖြန့်ဖြူးသည် Kinotehnik အလင်းအိမ်နှင့် Hawk ရဟတ်ယာဉ်-ဝုဒ်ဘက်ထရီ LED ။ Booth C2019 မှာ NAB 9020 မှာ Cartoni နှင့် Manios ဒစ်ဂျစ်တယ်သွားရောက်ကြည့်ရှု။ အခမဲ့ကုဒ် LV2933 အသုံးပြု Register ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Cartoni ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor manios ဒစ်ဂျစ်တယ် NAB 2019 သတင်း လှံ & Arrows tripod တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-02-28